Dumarka Ma Jecla Ninka Guskiisa uu Yeesho Sadexdan Calamadood. - Hablaha Media Network
HMN:- Dumarka waxaa ay yihin kuwa qiyaasa ama sheegi kara ninka wax uu yahay ama uu galo marka laga fiirsho dhanka ciyaaraha ka dhaca sariiraha iyo waliba sida uu ula dhaqmo bulshada inteeda kala waayo dumarka waxa ay yihiin ishi qaaate aan wax ka fakan.
Dumarka ma jecla nink ay ku arkaan ilaa sadex calamadood mid kood marka la joogo kulanka sariirta iyo waliba bashaalka kale ii ay sameyaan dumarka iyo raga iska qaba ama kuwa sida kale uwada jooga.
Marka hadii aad leedahay sadexdaan calamood ogaw waxaad tahay qof aysan ka heli donin dumarka marka isku day in aad hablaha hadii ay sidaas kugu nacaan aad wax ka badasho bashaalkii hore.
1: Ninka guskiisa uu qaloocanyahay dumarka ma jecla waayo dhib ayuu u geysanaa kulanka sariirta.
2: Ninka guska yar hadana biyhiisa ay fudud yihiin dumarka ma jecla waayo labo dhib ayuu qaba kaas.
3: Dumarka ma jcelah ninka Guska weyn hadana biyihiisa aysan dhaween waayo waxa ay dareemayaan xauun badan marey howsheeda bagato kadib.